Free Thinker: အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်မြန်မာစာ၊ ပြဌာန်းစာအုပ် မှ အမှားများ_2
အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်မြန်မာစာ၊ ပြဌာန်းစာအုပ် မှ အမှားများ_2
ရဲစစ်တပ် အစုံစုံ သထုံနဲ့ ပခိုး (ပဲခူး)
ရဲစစ်တပ် ခြံအရံ၊ မြန်မာနယ့်တစ်ရိုး
စစ်သားကြီးလုံးလုံး၊ စစ်ဗိုလ်ကြီး ရှုံးလောက်ရဲ့
စစ်သားကြီးလုံးလုံး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ရှုံးလောက်ရဲ့
ဘယ်တိုင်းခြား ၀ံ့မတုန်း . . . . ။
ဘယ်တိုင်းခြား ၀ံ့မတုံး တဲ့။
တဲ့ . . မပါ။
ဤကမ္ဘာမှာ ပြည်မြန်မာရယ်လို့ ၀င်းခဲ့သတဲ့
၁။ ခွန်အားရှိသောစာ (ရွေးချယ်ချက်)
အစီအစဉ်ြ ပြုလုပ်ရ
နာမ်ကို၎င်း၊ . . . . . ကြိယာကို၎င်း
နာမ်ကိုလည်းကောင်း၊. . ကြိယာကိုလည်းကောင်း
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် အဆက်အစပ်မိစေရန် ကျွန်တော် ခွန်အားရှိသောစာ ပို့ချချက်ကို သွားချင်ပါသည်။
ခွန်အားရှိသောစာ ပို့ချချက် နိဒါန်းတွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးထား၏။
“ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း၏ တစ်သက်တာမှတ်တမ်းနှင့် အတွေးအခေါ်များ စာအုပ်တွင် ဆဋ္ဌမကဏ္ဍသည် တစ်သက်တာ၏ နိဂုံးချုပ်အပိုင်းဖြစ်ပေရာ ယခင်အပိုင်းများတွင် တစ်သက်တာ အဖြစ်အပျက်များနှင့် အတွေးအခေါ်များ ရောညှပ်ကာ ရေးသားထားသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။”
ဤစာကို မည်သူရေးသည်မသိ။ အတော့်ကို ချာတူးလန်လှပေသည်။ မြန်မာစာပို့ချချက်စာစဉ်တစ်ခုအနေနှင့် မြန်မာစာအရေးအသားကို အထူးဂရုစိုက် ရေးသားရန်လိုပေသည်။ အရေးအသားတိုင်းသည် စာသင်သားများအတွက် စံပြဖြစ်နေရန်လို၏။ ဤကဲ့သို့သော အရေးအသားများကို နေရာတော်တော်များများတွင် တွေ့ရပေရာ သက်ဆိုင်ရာနေရာများ၌ ဖော်ထုတ်တင်ပြသွားပါမည်။ မြန်မာစာကို ပို့ချသူအနေနှင့် မြန်မာစာကို အမြီးအမောက်တည့်အောင် မရေးနိုင်ခြင်းကား မြန်မာစာဌာန၏ သိက္ခာကို ချရာရောက်ပေသည်။
၁။ ခွန်အားရှိသောစာ (ပို့ချချက်)
ရတနာပုံ ၀တ္ထုကို . . . . ရေးခဲ့သည်။
(၂) အချက် ကျကျရေးတတ်ခြင်း
(၂) အချက်ကျကျ ရေးတတ်ခြင်း
အားနည်းနေပါက . . .
ခနော်ခနဲ့ဖြစ်နေပါက . . . .
. . . နေပါက ကို နှစ်ခါ ထပ်သုံးထားသည်။
လေ့ကျင့်ရန် မေးခွန်းများ ၃။
ပထမနှစ်မြန်မာစာ ပြဌာန်းစာအုပ်များတွင် စာလုံးပေါင်းအမှားများ၊ အဖြတ်အတောက်အမှားများ အလွန်များပါသည်။ ကျွန်တော် ယခုဖြော်ပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စာတစ်ပုဒ်အတွင်း၌ပင် မည်မျှများပြားကြောင်း သိသာရုံမျှ ဖြစ်ပါသည်။ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ပြဌာန်းချက် စာအုပ်အားလုံးကို စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီး အမှားစာရင်း ပြုစုမည်ဆိုလျှင် ဧရာမ စာအုပ်ကြီး တစ်အုပ်စာလောက် ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းနိုင်ကြပါပြီ။
ဂျာနယ်ထဲတွင် အကုန်အစင်ဖော်ပြရန်မှာမူ စာမျက်နှာကိုငဲ့ညှာသောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့်လည်း စာဖတ်သူများအဖို့ ဤမျှ အသေးစိတ်သိရန် မလိုအပ်ဟုယူဆ၍ ကျွန်တော် အားလုံး မဖော်ပြတော့ပါ။
၂။ အလှနှင့်ရသ (ရွေးချယ်ချက်)
အချို့နေရာများတွင် စာကြောင်းများ ကျန်ခဲ့သည်လည်း ရှိသေး၏။ ဥပမာ - မ ၁၀၀၂ ရွေးချယ်ချက်နှင့် ပို့ချချက်စာအုပ်၊ စာမျက်နှာ ၇၄ မှ ၇၅ သို့အကူးတွင် - စာမျက်နှာ ၇၄ အဆုံး၌ - (လှေကားထစ်သို့ရောက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် မြင်းပန်းထိမ်သည်) - ဟု ဆုံးပြီး စာမျက်နှာ ၇၅ တွင် - (တရစပ်နှုတ်လှန်ထိုးကာ ကက်ကက်လန်ပြန်၍) ဟု ဖော်ပြထားလေရာ စာကြောင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု အဆက်အစပ်မရှိတော့ပါ။ ကြားထဲတွင် စာကြောင်းများ ကျန်ခဲ့ပါသည်။
အပိုင်း (၃) သို့ ဆက်ဖတ်ပါ။
Posted by အေးငြိမ်း at 5:22 PM